HARGEYSA, Somaliland - Madaxweyne Somaliland, Muuse Biixi Cabdi ayaa amaan kala dul-dhacay Puntland iyadoo Ciidamada labada maamul uu 15-kii bishan dagaal khasaaro xoog leh sababay ku dhexmaray nawaaxiga deegaanka Tukaraq, ee gobolka Sool.
Muuse Biixi ayaa u muuqday mid bedelay luuqadii dagaalka, isagoo adeegsaday erayo nabad xambaarsan mar uu ka hadlayay colaadda dib usoo rogaal-celis ee ka taagan Tukaraq, halkaasi oo ay isku hor-fadhiyaan Ciidamada maamulkiisa iyo kuwa Puntland.
Madaxweyne Muuse ayaa amaan kala dul-dhacay shacabka Puntland, oo uu ku tilmaamay inay yihiin dad gob ah, oo xiriir ah islamarkaana nabad-jecel, isagoo intaasi ku daray in Somaliland aysan duulaan ku ahayn Garoowe.
"Waxaan u aragnaa dadka aynu jaarka nahay ee reer Puntland inay yihiin Dad Gob ah oo xiriir ah, oo waxgarad ah," ayuu yiri Muuse Biixi oo ka hadlayay Munaasabada casho-sharafeed ah oo lagu qabtay Aqalka Madaxtooyada Somaliland.
Dhinac kale, Muuse Biixi ayaa ku eedeeyay dowladda Federaalka Soomaaliya inay ka mas'uul tahay dagaalka Tukaraq, islamarkaana ay ku xad-gudubtay xuduudka Somaliland ee uu guemysigu u sameeyay 1963-dii.
Munaasabada waxaa goob-joog ahaa Madaxweyniye-yaal hore, Xildhibaanno iyo Siyaasiyiin uu kamid ahaa Cali Khaliif Galayr, oo dhawaan Somaliland heshiis la galay, islamarkaana maamulkiisa Khaatumo hoos geeyay Hargeysa.
Dagaalka ka dhacaya Tukaraq ayaa waxaa uu u dhexeeya ciidamada Puntland iyo Somaliland kadib markii ciidamada maamulka Hargeysa sanadkaan bilowgiisa qabsadey Tuulada Tukaraq.
Dowlada Federaalka oo la tacaaleysa dagaalka ay kula jirto Al shabaab ayaa tageero la hesha ciidamo gaaraya 20 Kun Askari kuwasoo ka socda wadamada Afrika.
Tukaraq waxaa wali ka taagan xiisad dagaal, iyadoo Ciidamada Puntland ay isku hor-fadhiyaan...